merolagani - दुई वर्ष पहिले किनेको ४३० कित्ता हकप्रद शेयर गायब
नवीन ढुंगाना । ललितपुर कुपण्डोलकी रिता अवाले महर्जनले सनराईज बैंक लिमिटेडले बिक्रीमा ल्याएको हकप्रद शेयर गत बर्ष खरिद गरिन् । बि.स.२०७४ बैशाख २८ गतेसम्म कायम शेयरधनीले सोही वर्षको असार १९ गतेसम्म खरिद गर्न पाउने गरी बैंकले एक करोड ६३ लाख ५९ हजार ६ सय ३६ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको थियो ।
आफुसंग भएको १४ सय ३४ कित्ता शेयरको ३० प्रतिशत हकप्रद किन्न पाउने ब्यवस्था अनुसार रिताले ४३० कित्ता हकप्रद शेयर ४३ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिन् ।
बि.स.२०७४ असार ९ गते शुक्रबार रिताले प्रभु क्यापिटल मार्फत हकप्रद खरिद गरेकी थिईन । उनले हकप्रद किन्न आवेदन गरेको समयमा शेयर खरिद प्रक्रिया अहिले जस्तो पूर्ण डिजिटल भई सकेको थिएन ।
रिताले भौतिक रुपमा हकप्रद खरिद गर्नु पर्दथ्यो कागजी फारममार्फत उनले गरिन पनि त्यस्तै । तर किनिएको हकप्रद शेयर भने डिम्याट खातामा आउने ब्यवस्था तत्कालिन अवस्थामा थियो ।
हकप्रद खरिदको अर्धकट्टी हेर्नुहाेस्
आफ्नै व्यवसायमा ब्यस्त रिताले रकम तिरे पछि सो रकम बराबरको हकप्रद आफ्नो खातामा आएको होला भन्ने ठानिन् तर खोजी गरिनन् । हकप्रद शेयर किनीएको एक वर्ष ८ महिना पछि रिताले आफ्नो पाेर्टफोलियोमा गडबडि महसुस गरिन् । रिता र उनको छोराको नाममा सनराईज बैंकको आइपीओ बराबर कित्ता परेकाे थियाे । बैंकको हकप्रद,बाेनश लगायत सबै शेयर पनि बराबर संख्यामा उनीहरुले किनेका तथा पाएका थिए ।
उक्त हकप्रद खरिद गरिए पछिको समयमा बैंकले आफ्ना शेयर धनीलाई आर्थिक वर्ष ०७३।०७४मा वितरण भएको १५ प्रतिशत बोनश र आर्थिक वर्ष ०७४।०७५ मा ११.५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरि सकेको छ ।
यो अवधिको लाभांस र हकप्रद शेयर गरेर छोराको पाेर्टफोलियोमा बैंकको शेयर संख्या दुई हजार कित्ताभन्दा धेरै पुगिसकेको थियो तर रिताको खातामा १६ सय हाराहारी मात्रै शेयर पाईयो । एउटै क्यापिटलमा खोलिएको डिम्याट खातामा एकै समयमा समान मूल्यमा किनिएको सनराईज बैंकको हकप्रद सहितको शेयर कित्ता रिताको खातामा कसरी ५ सय कित्ताले कमि भयो ? महर्जन परिवार अचम्ममा परे र सुरु भयो गायब करिब डेढ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको शेयरको खोजी ।
शेयर खोज्दै भौतारिदा
करिब ५ सय कित्ता शेयर गायब भए पछि पति विकास महर्जनलाई लिएर रिताले शेयर खोजी सुरु गरिन् । सबै भन्दा पहिले उनीहरुले आफूले हकप्रद किनेको अर्धकट्टी सहित प्रभु क्यापिटलमा आफूहरुको समस्या सुनाए ।
प्रभु क्यापिटलले महर्जन जोडीलाई समस्या सनराईज क्यापिटलको भएको भन्दै उतै जान पन्छाई दिए । सनराईज क्यापिटलले फेरी प्रभु क्यापिटलमा बुझ्न भने । एउटाले अर्को र अर्कोले अर्कोलाई देखाएर समस्याबाट पन्छिन दुवै क्यापिटल लागे ।
समस्या समाधानका लागि मौखिक रुपमा क्यापिटल कार्यालयमा गरिएको अपिल सुनुवाई नभए पछि महर्जन दम्पतीले सनराईज बैंकका कम्पनी सचिव इश्वर पाठक र सनराईज क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयलाल श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरेर आफ्नो समस्या बारे निवेदन गरे ।
२७ फागुनमा बैंकका कम्पनी सचिव ईश्वर पाठक र क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठलाई बुझाइएको निवेदनमा पनि दुवै पक्षले कुनै चासो नदेखाएको महर्जन दम्पतीले मेरोलगानीलाई बताए । समस्या समाधानका लागि महर्जन दम्पती यतिबेला सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग पुगेका छन् । बैशाख ४ गते बुधबार उनीहरुले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देव प्रकाश गुप्ता समक्ष हराएको शेयर खोजीका लागि निवेदन दिएका छन् ।
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गका अनुसार रिता महर्जनको समस्या सम्बन्धमा कार्यालयले बैंकलाई के भएको हो भनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । सनराइज बैंकले भने सिडिएससीले यस सम्बन्धमा सिडिएसले आफुलाई प्रष्टीकरण सोध्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ । सिडिएस बैंकको सेवा प्रदायक मात्र भएको तर बैंकको नियमनकारी निकाय नभएको सनराइजको दाबी छ । यही विषयलाई लिएर अहिले सनराइज बैंक सिडिएससीसँग क्रुद्ध बनेको छ । बैंकले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गको स्पष्टीकरणको जवाफ पठाएको छैन् ।
गल्ती कस्को ?
सनराईज बैंकका कम्पनी सेक्रेटरी कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार रिता मर्हजनको हकमा पनि बैंकले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । बिक्री प्रबन्धक कार्यालयको मानवीय त्रुटीले यस्तो हुन पुग्ने भन्दै ती अधिकारीले भने ''उहाँहरु पिडित भएको निश्चित भए बैंकले हालसम्मको सबै बोनस सहित शेयर किनेर दिने छ ।''
अनुसन्धानलाई सहज होस् भनेर हकप्रद आवेदन गर्दा चेक क्लियरिङ भए नभएको जानकारी गराउन रिता महर्जनलाई भनिएको छ। ती अधिकारीका अनुसार चेक साटीएको प्रमाण दिन पिडितहरु मानिरहेका छैनन् ।
पिडितले कसरी शेयर पाउँछन् ?
सनराईज बैंकमा यस अघि पनि यस्तै एउटा घटना भएको थियो । कृष्ण रेग्मी नामका एक जना लगानीकर्ताले आफ्नो बुबाको नाममा भरेको हकप्रद पनि खातामा आएको थिएन । पैसा बुझाएको तर शेयर नपाएको उनको गुनासो पछि बैंकले सबै क्षतिपूर्तीसहित रेग्मीलाई शेयर किनेर दिएको थियो । पिडितको निवेदन पछि बिक्री प्रबन्धक र आवेदन संकलनकेन्द्र मार्फत बैंकले पिडितको गुनासोको छानबिन गर्छ ।
अनुसन्धानमा पिडित व्यक्तिको गुनासो जायज देखिएको खण्डमा बैंकको सञ्चालक समिति बैठक मार्फत निर्णय गराएर सम्बन्धित निवेदकले पाउनु पर्ने क्षतीपूर्तिसहित शेयर किनेर दिन्छ ।
भौतिक प्रणालीबाट शेयर अभौतीक (डिम्याट) प्रणालीमा जाँदा धेरै लगानीकर्ताको शेयरहरु यस्तो भएको आशंका गरिएको छ । तसर्थ आफ्नो शेयर हिसाब किताबमा शंका लागे तुरुन्त सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन गर्न धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको पनि गरेको छ ।